Maxamed Salaax oo ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC - BBC News Somali
Image caption Maxamed Salaax, Ciyaaryahanka Afrika Sannadka ee BBC 2017
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan abaalmarintan ku guuleysto," ayuu yiri 25-jirkan oo la hadlay BBC-da.
"Waa dareen wanaagsan marka aad wax un ku guuleysato. Waa sida adigoo sannad wanaagsan jooga, aad baan u faraxsanahay. Sannadka soo socda in aan ku guuleysto ayaan jeclaan lahaa!"
"Waxaan doonayaan in aan noqdo ciyaaryahankii abid ugu wanaagsanaa Masar, sidaa darteed shaqo adag ayaan qabanayaa," ayuu yiri ciyaaryahanka oo noqonaya qofkii seddaxaad ee Masar u dhashay ee abaalmarintan ku guuleysta, waana kii ugu horeeyay tan iyo 2008-dii.
"Markastaa waddadan ayaan ku soconayaa, waxaanna doonayaa in qofkastoo Masar u dhashay in uu sidaa sameeyo."
"Waxaan jeclaan lahaa in ciyaartoyda aan isku kooxda ka wada tirsan nahay (Liverpool) u mahadceliyo, sidoo kale xilli wanaagsan ayaan Roma la soo qaatay, marka waan u mahadcelinayaa ciyaartoyda iyo kooxda iyo xulka xulka Qarankayga," ayuu yiri Salaax.
"Tan iyo markii aan halkan imid, waxaan doonayay in aan si adag u shaqeeyo si qof kaste aan ugu muujiyo ciyaarteyda kubadda cagta. Waxaan ku taamayay in aan horyaalkan Premier League ku soo noqdo tan iyo markii aan ka tagay, haddaba aad baan u faraxsanahay."
"Waa mid uu u qalmo," ayuu yiri tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp, oo abaalmarinta ku wareejiyay ciyaaryahan Maxamed Salaax oo ku sugnaa xarunta tababarada kooxda ee Melwood.
"Waxaan xaqiiqdii ahay qof nasiib badan. Waxaan helay fursad aan kula ciyaaro laacibiin aan caadi ahayn, waana ku faraxsanahay in hadda aan haysto Maxamed."
"Arrinta wanaagsan waxay tahay in weli uu yaryahay, fursado badan oo horumar uu haysto, wanaag badan oo weli aan ku shaqeyn karno ayuu leeyahay, laakiin taasi waa sida loo baahan yahay in ay noqoto. Waa furxad wayn dhab ahaantii in lala shaqeeyo."
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la mid noqdo kuwaas si aan abaalmarintan ugu guuleysto," ayuu yiri laacibkan Masar ka soo jeedo.
Muuqaal MAXAMED SALAAX - Ciyaaryahanka xulka Masar iyo kooxda Liverpool
Mourinho: Liverpool waxay dhibayaan garsooraha ciyaarta habeen dambe